जनताको सहयोगमा समृद्ध नेपाल सम्भव छथममाया थापामगर (महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री) | Janaakash
Home / अन्तर्वार्ता / जनताको सहयोगमा समृद्ध नेपाल सम्भव छथममाया थापामगर (महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री)
Janaakash Media २२ माघ २०७५, मंगलवार २०:५१	अन्तर्वार्ता Leaveacomment 223 Views
२०७४ को प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि झण्डै दुईतिहाई बहुमतको आधारमा नेकपाबाट केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो त्यसमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै दिन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीको शपथ लिनु भएकी थममाया थापामगरको चर्चा त्यतिबेला देखिनै हुँदै आएको छ । हाल महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक बनाइएको मन्त्रालयको मन्त्रालय सम्हाली राख्नु भएको मन्त्रीको संघर्षको यात्रा खिचेका छौं ।
थममाया थापामगर म्याग्दी जिल्लाको चिमखोला हालको रघु गाउँपालिका ७ मा २०१५ सालमा जन्मनु भएको उहाँले सोही गाउँबाट प्रा.वि. स्तरको शिक्षा हासिल गर्नुभई एसएलसी प्रकाश माविबाट गर्नुभएको हो । त्यतिबेला छोरीलाई स्कुल पढाउने चलन नभएपनि थममायाले आफ्नो घर परिवारको सहयोगमा शिक्षा आर्जन गर्न सहज भएको हो । एसएलसी पास गरि सकेपछि बेनी क्याम्पसमा आइएमा अध्ययनरत रहँदारहँदै विद्यार्थी राजनीतिमा लागेकै कारण त्यतिबेलाको अवस्थामा पार्टीले भूमिगत जानुपर्ने निर्देशन पठाएको हुनाले आईएको अध्ययन अपुरै रहेको बताउनु भएको हो ।
त्यतिबेलाको नेकपा (माले) अन्तर्गत सानै उमेरमा राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएकी थममाया कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सानै उमेरदेखि सहयोग पु¥याउँदै आउनु भएको भएपनि २०४० मा अखिल नेपाल महिला संघ टोल कमिटी सदस्यता लिनुभएको हो । पार्टीको कुनै भूमिकामा नहुँदा पनि समाज परिवर्तन र विकासको लागि सधैं चिन्तित रहने स्वभावकी थममाया टोल कमिटीको सदस्य भइसकेपछि उनले गरेको मेहनत संघर्ष र संगठनको संरचना चुस्त, दुरुस्त बनाई सबै महिला दिदी बहिनीहरुमा विश्वास दिलाउन सफल हुनुभयो । त्यसपछि पार्टीले समेत उनको कार्यक्षमतालाई उच्च मूल्यांकन गर्दै म्याग्दी जिल्लाको अनेम संघको संस्थापक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । २०४३ सालमा पृथ्वी क्याम्पस पोखरामा अनेरास्ववियुको प्रा.क.अध्यक्ष एक कार्यकाल त्यसपछि अनेरास्ववियू कास्की जिल्ला कमिटीको सदस्य र पृथ्वी बहुमुखी क्याम्पसको स्वविवयू कोषाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई राम्रो कार्यसम्पादन गर्दै आएकी थममायालाई २०४७ मा बनेको नेकपा माक्र्सवादी लेनिनवादी र नेकपा (माले) एकीकरण पछि बनेका नेकपा (एमाले) पार्टीको कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसवर प्राप्त भयो । पार्टी कार्यालयमा अनेक खालका चुनौतीलाई सामना गर्दै जनताको पार्टी भएको हुनाले पार्टी कार्यालयमा रहँदा सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गरेर तारिफयोग्य भई आफ्नो कार्यदक्षता प्रमाणित गरेर देखाउनु भएको थियो । थममायाको चिमखोलाबाट राजनीतिक संघर्ष शुरु भई पोखराको क्षेत्रीय शहर हुँदै २०५८ सालसम्म काठमाडौं सम्म आइपुगिसकेको थियो र २०४८ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा थममायालाई पार्टीले पुनः आफ्नो जन्मथलो म्याग्दीको उम्मेदवारको रुपमा जिम्मेवारी दियो । जुनसुकै काम दत्तचित्त भएर लक्ष्य प्राप्ती गर्न सक्ने क्षमता राख्ने थममायाले २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा बिजय हासिल गर्नुभयो र २०४८ मा नै नेकपा (एमाले) अनेम संघको अध्यक्ष हुँदै सोही वर्ष भएको अनेमसंघको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो । त्यसपछि २०५२ मा नेकपा एमालेको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य, २०५४ मा नेकपा एमालेको छैठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभयो । र नेकपा एमालेको सातौं महाधिवेशनमा भने असफलताको सिढी ओर्लनुप¥यो तै पनि कत्तिपनि हार नखाइकन पार्टीको नीति, सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेर निरन्तर पार्टी, समाज र विकासको लागि खटिराख्नुभयो र आठौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा अत्याधिक मत ल्याई विजयी हुनुभयो र वैकल्पिक पोलिट्ब्यूरो सदस्यको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभयो । यही बीचमा भएको २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक कोटाबाट सभासद्को जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो र नेकपा (एमाले)को नवौ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भई पोलिट्ब्यूरो सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो । २०७४ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकीकरण पछि नेकपाको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतमा रहनुभएको छ भने हाल नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीको हैसियतमा रहनुभएको छ । उहाँसँग हाम्रा प्रधान सम्पादक मोहन कार्कीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
० तपाई अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको हैसियतमा रहनुभएको छ । यस मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा गरेको प्रगतिको बारेमा संक्षेपमा बताइदिनुस न ?
म्हिला बालबालिका जेष्ठ नागरिक समाज कल्याण र अपाङ्ग यस मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ । समग्र रुपमा भन्दाखेरी झण्डै ८० प्रतिशत जनताहरु यसै सामाजिक सरोकारभित्र पर्छन् । त्यही मन्त्रालय हो यो त्यसैले अत्यन्तै जम्मेवार भई काम गर्नपर्ने हुन्छ । अहिले खासगरी हामीले संविधानको मर्म अनुसार महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ लगायतका ऐन, कानूनहरु बनाइरहेका छौं । जेष्ठ नागरिकको, अपाङको, बालबालिका सम्बन्धी चाहिँ अलरेडी बनाइसकेका छौं । जेष्ठ नागरिक र अपाङको संशोधन गरेर बनाइसकेका छौं । नियमावलीहरु बनाउने क्रममा छन् । महिलाहरुको हिजो अर्कै स्थिति थियो । अहिले संविधान उल्लेख गरेका कानून र नीतिको जुन मर्म छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजाने गरी मसिनो ढंगबाट अध्ययन गर्दै केलाएर महिलाहरुलाई सामाजिक रुपमा आर्थिक रुपमा भोगेका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिई विभिन्न तहबाट छलफल गरेका छौं । विशेषतः महिला हिंसाका घटनाहरु घटे । यो बीचमा धेरै ती घटनाहरुलाई सम्बन्धित ठाउँहरुमा गएर कसरी घटना घटिरहेको छ । त्यसलाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने काम गरेका छौं ।
अहिले तिन तहको सरकार छ त्यसमध्ये सबैभन्दा जनतासँग नजिक स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकारको बीचमा हामीले जनप्रतिनिधिहरु जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरु, प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरुबीचमा सातै प्रदेशमा महिला हिंसालाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ र आफ्नो प्रदेशमा कस्ता खालका समस्याहरु छन्, महिला हिंसाका स्वरुपहरु कस्ता छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्ने कामहरु भएको छ । ती महिला हिंसाका स्वरुपहरुलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ महिला हिंसालाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ । साथै महिलाहरुले भूगोलमा विभिन्न खालका समस्याहरु भोगिरहेका छन् । पश्चिमतिर छाउपडीको रुपमा अहिले पनि हिंसाको रुप देखिरहेका छन् । त्यस्तै अर्को बालविवाह, बोक्सीको नाममा अमानवीय हिंसाहरु भइरहेका घटनाहरु त्यस्ता ठाउँहरुमा ठाउँ विशेष समुदाय विशेषहरुमा त्यस ठाउँमा पुगेर केलाएर त्यस्ता घटनाहरु आउँदा दिनमा घटन् नदिन के के उपाय अपनाउन सकिन्छ भनेर योजना बनाउने काम गरेका छौं । विशेषत नीति, कार्यक्रम, ऐन नियम बनाउने कुराहरुमा नै बढी केन्द्रीत छौं ।
० नेपाली समाजको बारेमा उठाउन चाहेँ, देशमा धेरै खालका परिवर्तन भइसके ६९ वर्षमा धेरैखालका सरकार बने, प्रधानमन्त्री बने व्यवस्था फेरिए तर कुनै पनि हजुरबा हजुरआमाले आफ्ना नाति नातिना खेलाएर बाँच्ने रहर पछिल्लो समय पूरा हुन छोड्यो । दिनानुदिन हाम्रा दाजुभाई दिदीबहिनीहरु गाउँमा भएका शहरमा शहरमा भएका विदेशमा छन् । यसको बारेमा तपाई समाज कल्याणसँग जोडिनुभएको हुँदा क्याविनेटमा कस्तो पहल गरिराख्नुभएको छ ?
जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संसदमा पेश गरिसकेका छौं । अहलिे विभिन्न कारणहरुले गर्दा हजुरआमा बुवा, आमा परिवारसँगसँगै बस्ने स्थिति क्रम कम हुँदै गइराखेको छ । तपाईले उठाएको विषय सही हो । मूख्य विदेशिनु पर्ने कारण बेरोजगार त्यस्तै अन्य कारणहरु पनि होलान, तर सबैभन्दा देखिएको मूख्य कारण बेरोजगार नै हो । अर्को पक्ष भनेको मानिसहरुमा व्यस्तता र सुविधा, सुखसयल खोज्दा सामाजिक मर्यादा पनि भूल्दै गएको छ । त्यसकारण बृद्धबृद्धा अवस्थामा आफ्ना सन्तानले कर्तव्य नभूलुन र सरकारले समेत आफ्नो दायित्व पूरा गराउन जेष्ठ नागरिक एनले छोराछोरीको कमाई १० प्रतिशत ६० वर्ष पुगेका बुवा, आमालाई उनीहरुको खातामा सिधै जाने व्यवस्था गरिएको छ । अर्कोतर्फ यो विखण्डित भएको समाजलाई जोड्न हजुरबुवा, हजुरआमा, बुवा, नाति नातिनासँगै बसेर रमाउने वातावरण चाहिँ हाम्रै देशमा रोजगार सृर्जना गरेर मात्र गर्न सकिन्छ त्यसो भएको हुनाले राज्यले सोच्नुपर्छ । यो संवेदनशील विषयमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अत्यन्तै संवेदनशील छ । गम्भीर भएर सोचेको छ । विकल्पको उपायहरुको बारेमा पनि छलफल भइराखेको छ । सिँगो राष्ट्रले यसको उपाय खोज्नुपर्छ भन्ने व्यापक छलफल भएको छ । क्रमशः सुधार गर्दै लान्छौं एकैचोटी हुँदैन सयौं वर्षदेखि बस्दै आएको संस्कार चिन्तन हो यसलाई सुधार गरेर कम गर्दै लैजाने योजना हाम्रो छ ।
० तपाई आफै पनि महिला हुनुहुन्छ । संघर्षको लामो यात्रा पनि पार गर्नुभएको छ ? अहिले पनि समाजमा नेपाली महिलाहरुले भोग्नु परेका पीर, मर्का अप्ठ्यारा छन् । केही समय अगाडि देशमा अमर्यादित घटनाहरु पनि घटेका थिए । विपक्षीले तिनै कुराहरुलाई उठाएर विरोध गरिरहेका छन् । तपाई मन्त्रीको हैसियतबाट तत्कालै कुनै एक्सनका कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ ?
एक्सन लिनको लागि कानून, नियमहरु प्रशस्त छन् । देशमा त्यसलाई कसरी प्रभावकारी ढंगबाट लागु गर्ने भन्ने बारेमा मूख्य कुरा हो । विशेष गरेर महिलामाथि हुने हिंसा हुन नदिनको लागि अग्रिम तयारी गर्ने सचेतना जगाउने जनताहरुलाई अहिले बनेका नियम कानूनहरुलाई प्रचार प्रसार गराउने एउटा महत्वपूर्ण काम हो । अर्को त्यस्ता खालका हिंसापूर्ण घटना घटेमा त्यस्ता खालका महिला हिंसा, बालबालिका माथि हिंसा गर्नेलाई पीडकहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याएर छिटोभन्दा छिटो कारवाही गर्ने जो पीडित छन् उनीहरुलाई उपचार संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यो राज्यको दायित्व हो । राज्यले त्यस्ता घटना घटाउने अपराधीहरुलाई कारवाही भएको पनि छ । सबै घटनामा संलग्न भएका अपराधीहरु क्तिपय पक्राउ परेका पनि छैनन् अपवादको रुपमा कोहीकोही घटनाका अपराधीहरु नियन्त्रण गर्न बाँकी नै छ । यसमा विभिन्न कारणहरु छन् त्यो सबैलाई थाहा भइसकेकै कुरा हो ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रारम्भिक छानविन हो । त्यही विषयमा नै कमीकमजोरी भएर दसी प्रमाणहरु मेटाउने काम भइसकेपछि सबुत पु¥याउन निकै कठिन हुँदोरहेछ भन्ने देखिएको छ । तर पनि दोषी पत्ता लगाउन प्रयत्न भइराखेका छन् । कुनै हालतमा त्यस्ता अपराधीहरु छुट्ने कुरा आउँदैन । एकदिन न एकदिन अपराधीहरु कानूनी घेरामा आउनु पर्ने हुन्छ । यस्ता खालका घटनाहरुको बारेमा मन्त्रालयले घटना घट्न नदिन जनचेतना नै मूल रुपमा जनतासँग सहकार्य गरेर घटना घट्न नदिने कुरामा बढी जोड दिएको छ । जस्तै सरोकार पक्ष, जनप्रतिनिधिहरु, संघसंस्थाहरु प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पक्षहरु सिँगो समाजलाई सचेतना जगाउने पक्षहरु मिलेर जानुपर्छ । त्यसो गर्दा अपराधीलाई तत्कालको तत्कालै जनताले घटनास्थलबाटै पक्राउ गर्न सक्ने जनचेतना नै सबैभन्दा ठुलो एक्सन हो ।
० अहिले नेकपाको सरकार आफ्नै ढंगले चल्न थाल्यो भनेर विपक्षीले आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसमा आम नागरिकहरु पनि कतैकतै सोचेको जस्तो काम गर्न सकेन भन्ने गरेका छन् । तपाई क्याविनेटको सदस्यको हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?
मलाई के लाग्छ भने अहिलेको सरकार जनताप्रति अत्यन्तै जिम्मेवार र अत्यन्तै इमान्दारका साथ जनताको बीचमा आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरु घोषणाहरुलाई जिम्मेवार भएर पूरा गराउन लागि रहेको छ । मन्त्रीहरु पनि रातदिन गरेर खटिराख्नु भएको छ । आफ्नो मन्त्रालय मातहतका कामहरु कसरी जनतालाई सेवा सुविधा पु¥याउन सकिन्छ बढीभन्दा बढी जनताका समस्याका समाधान गर्न सकिन्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने हाम्रो नारा छ त्यो हामी कसरी छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्न सक्छौं यो महत्वपूर्ण विषयमा चिन्तन मनन गरेर एकपछि अर्को कार्यक्रम अगाडि बढाउने कामहरु भइरहेका छन् । हाम्रो देशमा महारोगको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारलाई रोक्नको लागि हिजो भएका अनियमितताहरुलाई रोक्ने काम भइराखेको तपाइहरुले पनि महशुस गर्नुभएकै छ । मन्त्रीमण्डलबाटै भ्रष्टाचार रोक्नको लागि म भ्रष्टाचार गर्दिन म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने नारालाई सशक्त ढंगले लागु गर्दै आएका छौं । यो बीचमा मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा डुबेको, मुछिएको त्यतिधेरै तपाइहरुले सुन्नु परेको छैन । विगतमा जस्तो सरकारको मुल कुरा भनेको जनताप्रति इमान्दार हुने कुराहरु हो । त्यो इमान्दारिताका साथ सरकार लागिरहेको छ । हामीले धेरै कानूनसँग बाझिएका कानूनहरुलाई सच्याउनुपर्ने संशोधन गर्नुपर्ने कतिपय नयाँ ऐनहरु बनाउनु पर्ने कारणले गर्दा ऐन नीतिहरु बनाउने कुरामा बढी समय गएको छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु माथिदेखि तलसम्म भइरहेको छ । यी सबै व्यवस्थित गर्नको लागि केही समय लाग्दो रहेछ । त्यसैले कतिपय कामहरु परिणाममा नदेखिएको होकी भन्ने भान पर्न सक्छ । त्यस्तो होइन । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरिराखेकै छ । परिणामहरु प्नि आइराखेको छ । सयौं बर्षदेखि थाँतिरहेको समस्या दश महिनामा नै समाधान हुन्छ भन्ने होइन । त्यसलाई साफ गर्दै लैजाने सबैभन्दा ठुलो कुरा प्रतिबद्धता हो । त्यो प्रतिबद्धता छ । त्यो सच्याउने काम भएको छ, हिजोको गलत कामहरुलाई दोहो¥याउने काम भएको छैन । सफा बनाउँदै लाने काम शुरु भएको छ । केही पनि भएको छैन भन्ने कुरामा म सहमत छैन ।
जनताको पूर्ण विश्वास लिएर झण्डै दुई तिहाइको जनताको माया गरेर पठाएका छन् । यो सरकारले जनताको भावना, विश्वासलाई देशको बिकास गर्नको लागि एकदमै सुक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गरेर काम गर्दै आइरहेको छ । सबै काम सरकार एक्लैले गरेर सम्भव छैन । जनताको सहयोग र सबै तिरबाट सहयोग गरी समृद्ध नेपाल बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो राष्ट्र लामो राजनीतिक द्वन्द्धबाट अहिले राजनीतिक स्थिरतामा आइपुगेको छ । सबैले अवसरको रुपमा लिनुपर्छ । फेरी देशलाई अस्थिरता तिर लग्यो भने जनतालाई दुःख हुन्छ देश प्रतिको घात हुन्छ । कम्तिमा पनि यो स्थिर सरकारलाई ५ वर्षसम्म काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ । यो सरकारको कमिकमजोरी पनि औल्याउनु पर्छ र राम्रो कामको सबैले साथमा साथ दिएर जानुपर्छ जनताले सचेत गराउँदै सबल र सफल राष्ट्र बनाउन सबै लाग्नुपर्छ ।